Iza no Fivavahana Marina Raha ny Baiboly no Jerena?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kachin Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luxembourgeois Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mongol Mooré Myama Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quichua (Chimborazo) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tongan Tseky Tsonga Turkmène Twi Télougou Valencienne Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ahoana no anavahana ny fivavahana marina amin’ny fivavahan-diso? Hoy ny Baiboly: “Ny voa izay vokariny no hahafantaranareo tsara azy ireny. Mioty voaloboka na aviavy eny amin’ny tsilo ve ny olona?” (Matio 7:16) Ny voany no mampiavaka ny voaloboka amin’ny voaroy. Hoatr’izany koa ny fivavahana. Ny voany no ahafantarana hoe marina ilay izy sa diso. Ireto àry no mampiavaka ny fivavahana marina:
Mampianatra an’izay lazain’ny Baiboly ny fivavahana marina, fa tsy mampianatra hevitr’olombelona. (Jaona 4:24; 17:17) Anisan’izany ny hoe tsy manana fanahy tsy mety maty ny olona, sy ny hoe ho lasa paradisa ny tany ka ho afaka hiaina mandrakizay ao ny olona. (Salamo 37:29; Isaia 35:5, 6; Salamo 146:4) Tsy matahotra mampiharihary ny fampianaran-diso koa ny fivavahana marina.—Matio 15:9; 23:27, 28.
Manampy ny olona hahafantatra an’Andriamanitra ny fivavahana marina. Ampianariny hoe Jehovah no anaran’Andriamanitra. (Salamo 83:18; Isaia 42:8; Jaona 17:3, 6) Tsy mampianatra ny fivavahana marina hoe tsy takatry ny saina Andriamanitra na hoe tsy miraharaha antsika izy. Ampahafantariny ny olona kosa fa tian’Andriamanitra hifandray aminy isika.—Jakoba 4:8.
Ampianarin’ny fivavahana marina fa i Jesosy Kristy no nasain’Andriamanitra namonjy antsika. (Asan’ny Apostoly 4:10, 12) Mankatò ny didin’i Jesosy ny mpivavaka ao ary miezaka manahaka azy.—Jaona 13:15; 15:14.
Ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no antenain’ny fivavahana marina hoe hamaha ny olana mahazo ny olombelona. Mazoto mitory momba an’io Fanjakana io ny mpivavaka ao.—Matio 10:7; 24:14.
Mampirisika ny olona hifankatia ny fivavahana marina. (Jaona 13:35) Mampianatra koa izy io fa tokony hohajaina sy horaisina tsara ny olona rehetra, na inona na inona firazanany, kolontsainy, fiteniny, ary fiaviany. (Asan’ny Apostoly 10:34, 35) Tia ny olon-drehetra ny mpivavaka ao ka tsy mety mandeha miady.—Mika 4:3; 1 Jaona 3:11, 12.
Tsy misy mpitondra fivavahana karamaina ao amin’ny fivavahana marina. Tsy misy olona omena anaram-boninahitra miavaka be koa ao.—Matio 23:8-12; 1 Petera 5:2, 3.
Tsy manao politika mihitsy ny fivavahana marina. (Jaona 17:16; 18:36) Manaja sy mankatò ny fanjakana ao amin’ny tany misy azy anefa ny mpivavaka ao. Hoy mantsy ny Baiboly: “Aloavy amin’i Kaisara izay an’i Kaisara [ny mpitondra fanjakana], fa amin’Andriamanitra kosa izay an’Andriamanitra.”—Marka 12:17; Romanina 13:1, 2.
Iainana mihitsy ny fivavahana marina, fa tsy fombafomba na fahazarana fotsiny. Mankatò ny toro lalana ao amin’ny Baiboly ny mpivavaka ao, eo amin’ny fiainany manontolo. (Efesianina 5:3-5; 1 Jaona 3:18) Tsy hoe mahatsiaro ho voafehifehy anefa izy ireo amin’izany, fa faly manompo an’ilay “Andriamanitra falifaly.”—1 Timoty 1:11.
Vitsy ny olona manaraka ny fivavahana marina. (Matio 7:13, 14) Ambanina sy esoina ary enjehina matetika ireo mpivavaka ao, satria manao ny sitrapon’Andriamanitra.—Matio 5:10-12.
Tsy hoe izay fivavahana mety aminao no atao hoe fivavahana marina
Mampidi-doza raha hoe izay fivavahana mety aminao ihany no tianao. Efa nilaza ny Baiboly fa ‘hanangona mpampianatra [na mpitondra fivavahana] ho an’ny tenany ny olona, mba handrenesany zavatra mahafinaritra ny sofiny.’ (2 Timoty 4:3) Mampirisika antsika kosa ny Baiboly mba hanaraka ny “fivavahana madio sady tsy misy loto eo imason’Andriamanitra Raintsika.” Tsy maninona na dia tsy dia tian’ny olona aza ilay fivavahana.—Jakoba 1:27; Jaona 15:18, 19.
Tokony Hanadihady Ianao
Eo am-pelatanan’izay fivavahana arahinao ny famonjena anao sy ny hoavinao mandrakizay.
Hizara Hizara Ahoana no Ahafantarako ny Fivavahana Marina?
ijwbq no. 92
Tsy Maintsy Manana ny Fivavahanao ve Ianao vao Ankasitrahan’Andriamanitra?